गर्मी मौसममा प्याजको सेवन ! यस्ता छन् फाइदाहरु – Waikhari
गृहपृष्ठ जीवन शैली गर्मी मौसममा प्याजको सेवन ! यस्ता छन् फाइदाहरु
काठमाडौं । केही साता अघिदेखि गर्मी ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो गर्मी सिजनमा मानिसहरुले खानपानमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । गर्मी सिजनमा कयौं मानिसहरुले आफूलाई तन्दुरुस्त राख्न चिसो चिज बढी खान्छन् । केहीले त आफ्नो भोजन नै कम गर्ने गर्छन् । साथै केही मानिसहरुले मौसम अनुसारको भोजनमा पनि विशेष ध्यान दिन्छन् । ती भोजनहरु मध्ये प्याज पनि एक हो । प्याज हाम्रो मुलुकमा पनि बढी प्रयोग गरिने खाद्य पदार्थ हो ।